Mwenje yeBohemian, naRamón María del Valle-Inclán. Kuongorora | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Theater
Mwenje yeBohemian Icho chinyorwa cheSpanish zvinyorwa. Basa rekutanga iro munyori waro, Ramon Maria del Valle-Inclan, Ndinodana zvinotyisa. Nhasi ndinounza ongororo pfupi yemavara aya izvo zvirokwazvo isu tese takaverenga mumakore edu epamusoro chikoro kana kuti gare gare. Uye zvakare nekuti, maererano neazvino nyika panorama, kukosha kwayo kuri kuramba kuchishanda kune ino yezvino.
1 Mwenje yeBohemian
1.1 Yokutanga inotyisa
1.2 Mavambo uye dingindira
1.5 Art uye mutauro
Mwenje yeBohemian Ndicho tamba rakaburitswa mushanduro yekutanga na kununurwa vhiki nevhiki en 1920 in the vhiki nevhiki España. En 1924 iyo yekupedzisira vhezheni, yakadzokororwa uye yakabudiswazve nemamwe matatu maficha. Asi yaisazoburitswa kusvika 1970.
Nayo Valle-Inclán inogadzira mutsva wemitambo, "unotyisa". NdiMax Estrella, protagonist, anozvitora senzira yekutarisa pasi.
Mavambo uye dingindira
Inorondedzera husiku hwekupedzisira muhupenyu hwaMax Estrella, mudetembi murombo uye bofu, akaroora nemwanasikana. Kune uyu hunhu Valle-Inclán aive akavakirwa pamunhu, hupenyu uye kufa kwemunyori weSevillian Kusundira kure zvakafanana. Asi rondedzero inova a inosiririsa uye inotyisa mufananidzo wekusagoneka kwekugara mune yakaremara, isina kururama, inodzvinyirira uye isina musoro Spain..
Kunonamata kwaMax Estrella ndeye kuburukira kwakadzika kwekusaruramisira, nhamo nekusaziva. Uye zvakare, hatizive kana pakupedzisira anofa nechando, nzara, kunwa kana kubva pamoyo wake wakaneta uchirova pamberi pechiono chenyika yakamupoteredza.
Yakagadzirwa ne 15 zviono izvo, pakutanga, zvinoita kunge zvisina kubatana uye zvinokura munzvimbo dzakasiyana. Zvisinei, kunze kwe protagonist, pane zvimwe zvinhu zvinopa kubatana kune chokwadi. Ivo, semuenzaniso, iyo kuvapo kwerufu kubva pachiitiko I, kukokwa kunoitwa naMax kumukadzi wake nemwanasikana kuzviuraya kunotarisira kupera kwemutambo.
Izvo zvakare tikiti rotari, se tariro yekutiza kubva kunhamo uye kuti achazopihwa mubairo mushure mekufa kwaMax.
Asi chimiro muzvikamu zvitatu chinogona kukosheswa:
El kutanga muchiitiko ichocho ini.
Un muviri wepakatil nekushanya kwaMax kuMadrid husiku kwakakamurwa kuita nhanho mbiri: Kugara kwaMax mujeri nemushandi wechiCatalan uye kuenda kwake kusvika parufu rwemushandi.
Uye yokupedzisira kubva kunofambira uko Max anodzokera kumba ndokufa.
Kune anopfuura anopfuura chiuru avo vanopinda uye vanosiya iri basa, mamwe akavakirwa pachokwadi. Asi ivo vakatanhamara kupfuura zvese:
Max Nyeredziyakaoma uye inoyevedza, pamwe kwete yakanaka chaizvo asi nedzimwe nguva dzehukuru hunoshamisa. Mu kuseka uye kunyunyuta, chiremerera uye kusakosha, kuzvikudza uye kuita kwakasangana. Uye kunyanya inoratidza kwayo kukuru hasha pamusoro pevanhu vasina kururama yenguva pamwe nekunzwa kwake kwehukama kune vasina rombo rakanaka.
Y ChiLatin chipo, Mumvuri waMax unomuperekedza kwese. A bohemian hupenyu katuni uye zvakare mukomana zvinosiririsa nekuda kwekusatendeka kwavo uye kuderera, kunyanya kumagumo, paanomusiya pamusuwo wemba yake ndokutora chikwama chake.
Asi kune zvimwe zvakawanda. Pica Lagartos, Pitito, Serafín el Bonito, Gurukota Don Francisco, Pisabien, concierge, pfambi kana ivo vanogadzika. Anosarudzika akakodzera kuoneka kwaRubén Darío uye Marqués de Bradomín.
Art uye mutauro
Hwaro hwekutyisa ndiko kushanduka, kukanganisa kwechokwadi. Iyo parodic deformation haina kubva pane chero chinhu, kutaura zvazviri, inotarisirwa kunyangwe kusvika kurufu. Iyo kushandiswa kwemisiyano pakati pezvinorwadza uye zvinotyisa, sekumuka kwaMax. Uye zvinozivikanwa neiyo mhando yekuseka, ichiruma uye ichivava.
Mune duramazwi rinoshamisika upfumi uye zvakasiyana mune musanganiswa pakati pemutauro wekutaura, zvinyadzi kana kutaura kwakakurumbira kwetsika yeMadrid.
Izvozvo Mwenje yeBohemian es kuverenga zvakanaka chero nguva. Kuti uwane kana kunakidzwa zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Theater » Mwenje yeBohemian, naRamón María del Valle-Inclán. Kuongorora